News Collection: मनीषाको डिभोर्स ?
मनीषाको डिभोर्स ?
नयाँदिल्ली , श्रावण १४ - 'आमा बन्न एकदम मन छ तर थाहा छैन, आफैंले सन्तान जन्माउँछु वा धर्मसन्तान पाल्छु,' महिना दिनअघि नायिका मनीषा कोइरालाले भारतीय सिने म्यागजिन 'फिल्म फेयर' सँगको कुराकानीमा भनेकी थिइन् । दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायी सम्राट दाहालसँग लगनगाँठो कसेकी मनीषा त्यसपछि बारम्बार समाचारमा छाइरहिन्, आफूभन्दा ६ वर्ष कान्छा पतिसँगको खटपटको हल्लाले ।
यतिबेला फेरि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मनीषाको डिभोर्सको समाचार प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका छन् । 'अमर उजाला' ले विवाहबाट बेखुस मनीषाले पतिसँग डिभोर्स गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उक्त सञ्चारमाध्यमले मनीषा निकट सूत्रको हवाला दिँदै भनेको छ- 'मनीषा यतिबेला मुम्बईमा छिन् तर पनि उनलाई सम्बन्धविच्छेद गर्दाको अलिकति पनि दुःख छैन ।' अमर उजालाले दाबी गर्दै भनेको छ, 'उनीहरूले एक हप्ताअघि नै अलग हुने निर्णय गरेका थिए ।
निर्णय लिन मनीषा नेपाल घर पुगेकी थिइन् ।'
सम्राटसँग काठमाडौंमै शाही रबाफमा विवाह गरेकी मनीषाले आफ्ना केही बलिउड साथीभाइलाई समेत निम्त्याएकी थिइन् । तर विवाहको हनिमुन पिरियडलगत्तै सञ्चारमाध्यममा छाएका दुईको नकारात्मक समाचारले उनी तनावमा थिइन् । विवाहपछि बलिउड छोडेर गुपचुप बसेकी उनी पुनः बलिउडमा फर्किएकी छन् । आफ्ना फिल्ममा गरेको मनीषाको अभिनयबाट खुसी हुँदै रामगोपाल बर्माले उनको कमब्याकलाई सफलतासँग जोडेका थिए ।